Hanova ny mailaka Instagram - VidaBytes | LifeBytes
Imbetsaka izahay no mamorona mombamomba ny tambajotra sosialy miaraka amin'ny mailaka izay ajanontsika any aoriana. Ny olana dia, raha manana an'io mailaka io ihany ny tambajotra sosialy, tsy hahazo fampandrenesana ianao, ary hanana olana amin'ny fifandraisana amin'izy ireo koa ianao raha mila izany. Noho izany antony izany dia hifantoka amin'ny tambajotra iray izahay ary hanontany anao hoe: fantatrao ve ny fomba hanovana ny mailaka Instagram?
Mety ho efa liana ianao ary fantatrao hoe aiza no hanaovana izany, saingy mety tsy fantatrao ny fomba hanaovana izany. Aza manahy fa hanampy anao izahay izao.
1 Nahoana no hanova ny mailaka Instagram
2 Ahoana ny fanovana ny mailaka Instagram amin'ny fampiharana
3 Hanova ny mailaka Instagram amin'ny solosaina
4 Hanova ny mailaka Instagram nefa tsy miditra amin'ny kaonty
Nahoana no hanova ny mailaka Instagram
Betsaka ny antony mety haniry hanova ny mailaka Instagram.. Mety ho noho ny fijirihana ny kaontinao mailaka, noho ny adinonao ny tenimiafinao, noho ny tsy fampiasanao azy... Raha ny marina, mety ho antony rehetra mahatonga anao tsy maintsy hanova izany amin'ny tambajotra sosialy izany, fa tsy amin'ny Instagram.
Ny olana dia, mihoatra ny fotoana nisoratra anarana, dia maro no tsy mahafantatra tsara ny dingana tokony horaisina hanovana izany. Ary ity dia zavatra iray hiezahantsika ovaina.
Ahoana ny fanovana ny mailaka Instagram amin'ny fampiharana
Araky ny fantatrao, Instagram izao dia ahafahanao miditra amin'ny fampiharana finday (izay no mora sy haingana indrindra), na avy amin'ny solosaina. Amin'ny farany dia manana ny zava-drehetra tena voafetra ianao, saingy avelako hanova izany ianao. Ankehitriny, andao handeha tsikelikely.
Eto ianao ny toromarika hanovana azy avy amin'ny app. Inona no tokony hataonao?
Ny voalohany, sokafy ny Instagram amin'ny findainao. Rehefa misokatra dia mandehana any amin'ny mombamomba anao. Rehefa ao anatiny, tadiavo ny safidy "Hanova ny mombamomba"..
Raha mijery ianao, ny mailakao dia hiseho ao amin'ny mombamomba ny mombamomba anao. Raha tsy mivoaka izany dia tsy maintsy miditra amin'ny Safidy Fifandraisana ianao ary tokony hiseho eo izany.
Raha tsy mahazo na inona na inona ianao dia tsindrio ny Personal Information Settings. Ny mailaka izay nisoratra anaranao ny kaonty dia hiseho eo. Ary ny tiana atao dia ny manova izany. Ahoana?
Tsindrio ny adiresy mailaka. Izany dia ahafahanao mamafa ny mailaka misy anao ary mametraka ilay vaovao tianao. Rehefa azonao izany dia tsindrio ny bezel ambony havanana mba hanaiky ny fanovana.
Ny Instagram dia handefa mailaka anao amin'ny mailaka vaovao anao hanamarina fa tena mila an'io kaonty io ianao izao, noho izany dia tsy maintsy manome ilay rohy ianao satria, raha tsy manamarina izany ianao dia tsy ho afaka miditra amin'io mailaka io ianao.
Hanova ny mailaka Instagram amin'ny solosaina
Raha anisan'ireo tia manao izany amin'ny alalan'ny solosaina ianao dia fantaro fa azonao atao koa izany. Ary koa tena mora. Raha ny marina, dia ny manaraka ny dingana mitovy izay efa voalaza teo aloha, fa amin'ity tranga ity avy amin'ny solosaina. izany hoe:
Ampidiro ao amin'ny solosaina ny kaontinao Instagram.
Mankanesa amin'ny mombamomba anao.
Tsindrio ny fanovana ny mombamomba.
Hisy andiana angona hiseho toy ny tranokala, tantaram-piainany, firaisana ara-nofo… ary mailaka.
Kitiho ny toerana misy azy, vonoy ary ampio vaovao.
Ny Instagram dia handefa mailaka anao hanamarina ny fanovana ary rehefa vitanao izany dia ho vita ny dingana rehetra.
Hanova ny mailaka Instagram nefa tsy miditra amin'ny kaonty
Iray amin'ireo fika ananan'ny Instagram dia ny fahafahana manova ny mailaka tsy ao anatin'ny kaonty. Mety hitranga izany, ohatra, satria very ny findainao, na noho ianao manana kaonty hafa fotsiny ary tsy tianao na tsy azonao ampiasaina izany.
Raha mitranga aminao izany dia ny dingana tokony hataonao manomboka amin'ny fanokafana ny fampiharana Instagram. Raha mijery ianao, rehefa manontany ny angona fidiranao, manome anao fahafahana miditra fanampiana, eo ambanin'ny bokotra fanombohana. Tsindrio eo.
ankehitriny, Hanontaniana anao ny mailaka, ny nomeraon-telefaona, na ny solonanaranao. amin'ny kaonty Instagram tianao hanovana ny mailaka.
Hanome anao safidy maromaro izany: Mandraisa mailaka (amin'ny kaonty mifandray), hafatra an-tsoratra (SMS), na manomboka amin'ny Facebook. Miankina amin'izay fidinao dia ho haingana kokoa na latsaka.
Hiditra amina efijery vaovao ahafahanao manova ny tenimiafina ianao ary, amin'ny fotoana iray, dia hampiseho aminao ny mailaka ananany. Eo no tokony hamafa ilay anananao ary apetraho ny anao, ary raha mety ho nomeraon-telefaoninao ihany koa.
Rehefa nanamafy ny zava-drehetra ianao dia ho vita.
Raha ny marina, ny zavatra ataonao dia mihevitra ny Instagram fa tsy tadidinao ny tenimiafina, ary izany no antony anaovanao an'ity dingana ity, fa raha ny marina, ny tanjonao dia ny hanova ny mailaka nefa tsy miditra amin'ny kaonty. Saingy mety ho hevitra tsara izany raha tsy afaka miditra amin'ny kaontinao ianao amin'izao fotoana izao ary mila manova haingana ny mailaka.
Ankehitriny fantatrao ny fomba hanovana ny mailaka Instagram, rehefa mila izany ianao dia ho fantatrao ny dingana tokony hataonao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: LifeBytes » Tutorials » Hanova ny mailaka Instagram